Home Manufacturing GLT Plant in Zimbabwe
Gold Leaf Tobacco, the South African-based cigarette manufacturer, is planning to set up a manufacturing plant in Zimbabwe following the launch of its brand, Rudland & George (RG) there.
“Following the launch of our brand in Zimbabwe, I can safely say we are looking at setting up a manufacturing plant in Zimbabwe, but it’s still in the planning phases,” said Tanaka Matimbe, Gold Leaf’s country representative.
“We see great potential in Harare because it is central to our bigger market which is the Southern African Development Community region which we have been looking at getting into,” he added. “So we have plans to be a manufacturing concern in Zimbabwe.”
According to Matimbe, Zimbabwe is to be the company’s springboard into the regional market, and that the company is looking at registering its footprint in Zambia, Malawi, and Mozambique.
Zimbabwe cigarette manufacturing Golf Leaf Tobacco cigarettes